आध्यात्मिक कुराहरूमा मनन गरिरहनुहोस् | अध्ययन
लेखको भाषा अकोली अङ्ग्रेजी अजरबैजानी अजरबैजानी (सिरिलिक) अमेरिकी साङ्केतिक भाषा अरबी अर्जेन्टिनियन साङ्केतिक भाषा अल्बेनियन आइसल्याण्डिक आएमारा आम्हारिक आर्मेनियन आर्मेनियन (पश्‍चिमी) इग्बो इटालियन इटालियन साङ्केतिक भाषा इन्डोनिसियन इलोको इसोको उज्बेक उन्डुबेली (जिम्बावे) उर्दू एफिक एस्टोनियन ओरोमो ओसेसियन कन्नडा काजाक किकाम्बा किकुयु किन्यारवान्डा किरिवाती किरून्डी किर्गिज किसी कुइचुआ (इम्बाबुरा) कोरियन कोलम्बियन साङ्केतिक भाषा क्याटालान क्रिओ क्रोएसियन क्वेचा (बोलिभिया) गाउरानी गुजराती गून ग्रीक चिचेवा चिटुम्बुका चिटोंगा (मलावी) चिनियाँ क्यान्टोनिज (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (सरल) चिनियाँ साङ्केतिक भाषा चियाओ चिली साङ्केतिक भाषा चुभास चेक चोवे जर्जियन जर्मन जान्डे जापटेक (इस्मस) जापानी जापानी साङ्केतिक भाषा जाभानिज जिम्बावे साङ्केतिक भाषा टगालोग टर्कमेन टर्कमेन (सिरिलिक) टर्किश टाटार टिग्रिन्या टिभ टुभालुअन डच डेनिश ड्रेहु ताजिकी तामिल तेलगु तोक पिसिन थाई नर्वेली नेपाली पंगासिनन् पंजाबी पापियामेन्टो (अरुबा) पापियामेन्टो (कुरासाओ) पारसी पेरुभियन साङ्केतिक भाषा पोर्चुगिज पोलिश फिजियन फिनिश फिनिश साङ्केतिक भाषा फ्रान्सेली बंगाली बाओले बाटाक (टोबा) बिकोल बिस्लामा बुल्गेरियन ब्राजिलियन साङ्केतिक भाषा भियतनामिज मङ्गोलियन मराठी मले मल्यालम माया मालागासी मिहे मूर मेक्सिकन साङ्केतिक भाषा म्यासडोनियन युक्रेनियन योरूबा रुन्यानकोर रूसी रूसी साङ्केतिक भाषा रोमानियन लाट्भियन लिथुआनियन लुओ लुकोन्जो लुगान्डा वलिसियन वारे-वारे वोलाइटा शोना सर्बियन सर्बियन (रोमन) साङ्गो सामोअन सिंहला सिडामा सेबूआनो सेसेल्स क्रिओल सोट्सेल सोलोमन टापु पिजिन स्पेनिश स्पेनिश साङ्केतिक भाषा स्रानानटोंगो स्लोभाक स्लोभेनियन स्वाहिली स्विडिस हंगेरियन हाइटियन क्रिओल हिन्दी हिब्रू हिरी मोटु हिलिगेनोन हौसा
“यी कुराहरूमा चिन्तनमनन गर, त्यसैमा डुबिरह, ताकि तिम्रो प्रगति सबै मानिसहरूसामु प्रकट होस्।”—१ तिमो. ४:१५.
मनन गर्नु भनेको के हो?
हामीले मनन गर्न सक्ने केही राम्रा कुराहरू के-के हुन्‌?
हरेक दिन परमेश्वरको वचन मनन गर्दा के फाइदा हुन्छ?
१, २. मानिसको दिमाग कुन-कुन तरिकामा अचम्मलाग्दो छ?
मानिसको दिमाग अचम्म तरिकाले बनेको छ। दिमागले गर्दा नै मानिसले भाषा सिक्न सकेको हो। भाषा सम्बन्धी एक प्राध्यापक यसो भन्छन्‌: “भाषा सिक्ने क्षमता मानिसमा भएको विशिष्ट गुण हो।” भाषा परमेश्वरले मानिसलाई दिनुभएको उपहार हो। (भज. १३९:१४; प्रका. ४:११) भाषाले गर्दा हामी पढ्न, लेख्न, बोल्न र सुनेको कुरा बुझ्न सक्छौं। यहोवाको प्रशंसा गर्न र उहाँलाई प्रार्थना गर्न पनि सक्छौं। दिमागले कसरी यस्तो काम गर्न सक्छ भन्ने कुरा अझै पनि वैज्ञानिकहरूले राम्ररी बुझ्न सकेका छैनन्‌।
२ हाम्रो दिमाग अर्को तरिकामा पनि अचम्मलाग्दो छ। परमेश्वरले मानिसलाई “आफ्नै स्वरूपमा” सृष्टि गर्नुभएको थियो। त्यसैले हामी आफ्नो लागि आफैले छनौट गर्न स्वतन्त्र छौं। आफूले उपहार स्वरूप पाएको भाषा प्रयोग गरेर मानिसले यहोवाको प्रशंसा गर्न सक्छ।—उत्प. १:२७.
३. हामीलाई बुद्धिमान्‌ बनाउन यहोवाले के दिनुभएको छ?
३ भाषाको सृष्टिकर्ता यहोवाको प्रशंसा र सेवा गर्न चाहने जति सबैलाई उहाँले अमूल्य वरदान स्वरूप बाइबल दिनुभएको छ। अहिले बाइबल पूरा वा आंशिक गरी २ हजार ८ सयभन्दा धेरै भाषामा पाइन्छ। हामीले बाइबल पढेर परमेश्वरका विचार आफ्नो दिमागमा भर्न सक्छौं। (भज. ४०:५; ९२:५; १३९:१७) अनि परमेश्वरका ती विचारहरू मनन गऱ्यौं भने ‘त्यसबाट हासिल हुने बुद्धिले ख्रीष्ट येशूमाथिको विश्वासद्वारा हाम्रो उद्धार गर्नेछ।’—२ तिमोथी ३:१४-१७ पढ्नुहोस्।
४. मनन गर्नु भनेको के हो र हामी कस्ता प्रश्नहरू छलफल गर्नेछौं?
४ मनन गर्नु भनेको कुनै असल वा खराब कुरा गहिरिएर सोच्नु वा विचार गर्नु हो। (भज. ७७:१२; हितो. २४:१, २) हामीले मनन गर्न सक्ने दुईवटा सर्वोत्तम विषय छ। त्यो हो, यहोवा परमेश्वर र उहाँको छोरा येशू। (यूह. १७:३) त्यसोभए पढ्नु र मनन गर्नुबीच के सम्बन्ध छ? हामी कुन बेला मनन गर्न सक्छौं? मनन गर्ने रमाइलो बानी हामी कसरी बसाल्न सक्छौं? यस लेखमा यी प्रश्नहरूको जवाफ पाउनेछौं।
पढ्दा ध्यान दिनुहोस्
५, ६. पढेको कुरा राम्ररी बुझ्न र दिमागमा ठप्प राख्न के गर्नुपर्छ?
५ सास फेर्ने, हिंड्ने वा साइकल कुदाउने जस्ता कामहरू गर्न हामीले सोचिरहनु पर्दैन। हाम्रो दिमागले स्वतःस्फूर्त ती कामहरू गर्छ। तर पढ्दा पनि कहिलेकाहीं यस्तै भइरहेको हुन सक्छ। हाम्रो आँखा किताबमा भए तापनि दिमाग भने अन्त कतै डुलिरहेको हुन सक्छ। त्यसैले आफूले पढिरहेको विषयवस्तुको अर्थ के हो भनेर बुझ्ने कोसिस गर्नुपर्छ। कुनै एउटा अनुच्छेद वा उपशीर्षक पढिसकेपछि आफूले भर्खरै पढेको विषयवस्तु ठीकसँग बुझेको हो कि होइन भनेर एकछिन सोच्नु राम्रो हो। पढ्ने बेला मन यताउति डुलायौं वा ध्यान दिएनौं भने पढेको कुराबाट खासै लाभ उठाउन सक्दैनौं। यसो हुन नदिन के गर्न सक्छौं?
६ आवाज निकालेर पढ्दा सम्झन सजिलो हुन्छ भनेर वैज्ञानिकहरूले पत्ता लगाएका छन्‌। हाम्रो सृष्टिकर्तालाई पनि यो कुरा थाह छ। त्यसैले उहाँले यहोशूलाई व्यवस्थाको किताब “ध्यान” दिएर अर्थात्‌ गुनगुनाएर पढ्नू भन्नुभयो। (यहोशू १:८ पढ्नुहोस्) गुनगुनाएर अथवा मधुरो आवाजमा बाइबल पढ्दा पढेको कुरा दिमागमा ठप्प बस्छ र ध्यान दिन पनि सजिलो हुन्छ।
७. परमेश्वरको वचनबारे कस्तो बेला मनन गर्नु राम्रो हो? (शीर्षकमाथिको चित्र हेर्नुहोस्)
७ पढ्न हामीलाई खासै गाह्रो लाग्दैन होला तर पढेको कुरामा मनन गर्न भने मेहनत गर्नै पर्छ। शरीर र दिमाग थाकेको बेला ध्यान दिन गाह्रो हुन्छ। हाम्रो दिमाग चालै नपाई सजिलो अथवा त्यति मेहनत गर्नु नपर्ने कुराहरूमा गइहाल्छ। त्यसैले मनन गर्ने बेला आफूलाई अलमल्याउने कुरादेखि परै बस्नुपर्छ र शान्त अनि तनावमुक्त वातावरण रोज्नुपर्छ। भजनरचयिता दाऊद निद्रा नपरेको बेला राती ओछ्यानमा मनन गर्थे। (भज. ६३:६) येशूको दिमाग र सोच्ने क्षमतामा कुनै खोट नभए तापनि प्रार्थना र मनन गर्ने बेला उहाँले शान्त ठाउँ खोज्नुभयो।—लूका ६:१२.
मनन गर्न सकिने केही राम्रा विषय
८. (क) हामी कुन कुरामा मनन गर्न सक्छौं? (ख) यहोवाबारे अरूसित कुरा गर्दा उहाँलाई कस्तो लाग्छ?
८ बाइबलमा पढेका कुराहरू दिमागमा खेलाउनु वा सम्झने कोसिस गर्नु मनन गर्ने एउटा राम्रो तरिका हो। तर हामीले मनन गर्न सक्ने अरू कुराहरू पनि छन्‌। उदाहरणका लागि, कुनै सुन्दर फूल, पशु-प्राणी अथवा कुनै रमणीय दृश्य देख्दा एकछिन रोकिनुहोस् र आफैलाई सोध्नुहोस्, “यहोवाको यस्तो सुन्दर सृष्टिले मलाई के सिकाउँछ?” यसरी सोच्दा तपाईंको मन यहोवालाई धन्यवाद दिन उत्प्रेरित हुनेछ। त्यतिखेर तपाईंसित कोही छ भने आफूलाई मनमा लागेको कुरा तिनलाई बताउनुहोस्। (भज. १०४:२४; प्रेषि. १४:१७) यसरी मनन गरेर प्रार्थना गर्दा र उहाँबारे अरूसित कुरा गर्दा यहोवा खुसी हुनुहुन्छ। बाइबलले यसो भन्छ: “तब परमप्रभुको डर मान्नेहरूले आपसमा कुरा गरे, औ परमप्रभुले तिनीहरूका कुरा ध्यानसित सुन्नुभयो, औ उहाँको डर मान्नेहरू र उहाँको नाउँको सोच गर्नेहरूका नाउँ सम्झनाको पुस्तकमा उहाँकै सामने लेखियो।”—मला. ३:१६.
बाइबल विद्यार्थीलाई कस्तो मदत चाहिएको छ भनेर के तपाईं मनन गर्नुहुन्छ? (अनुच्छेद ९ हेर्नुहोस्)
९. (क) पावलले तिमोथीलाई कस्ता कुराहरूमा मनन गर्न सुझाव दिए? (ख) प्रचारको लागि तयारी गर्दा हामी पावलको सुझाव कसरी लागू गर्न सक्छौं?
९ आफ्नो बोली, बानीबेहोरा र शिक्षाले अरूलाई पार्न सक्ने असरबारे “चिन्तनमनन गर” भनेर प्रेषित पावलले तिमोथीलाई बताए। (१ तिमोथी ४:१२-१६ पढ्नुहोस्) तिमोथीले जस्तै हामी पनि हाम्रा विभिन्न आध्यात्मिक क्रियाकलापबारे मनन गर्न सक्छौं। जस्तै: विद्यार्थीसित बाइबल अध्ययन गर्न तयारी गर्दा तिनको मनको कुरा निकाल्न कुन प्रश्न सोध्ने वा कस्तो उदाहरण चलाउने भनेर हामी मनन गर्न सक्छौं। यसरी समय निकालेर तयारी गर्दा हाम्रो आफ्नै विश्वास पनि दह्रो हुन्छ अनि अझ प्रभावकारी र जोसिलो भएर बाइबल अध्ययन सञ्चालन गर्न मदत पाउँछौं। प्रचारमा जानुअघि पनि यसरी नै मनन गर्दै तयारी गऱ्यौं भने राम्ररी साक्षी दिन सकेकोमा हाम्रो आनन्द बढ्छ। (एज्रा ७:१० पढ्नुहोस्) जस्तै, प्रचारमा जानुअघि प्रेषितको किताबबाट कुनै एउटा अध्याय पढ्यौं भने अझ जोसिलो भएर प्रचार गर्न त्यसले जुरमुऱ्याउँछ। कुन बाइबल पद चलाउँदा, कुन प्रकाशन दिंदा अथवा कुन विषयमा कुरा गर्दा मानिसहरूको चासो जाग्न सक्छ, त्यस विषयमा पनि मनन गर्न सक्छौं। (२ तिमो. १:६) यसरी तयारी गर्दा हामी परमेश्वरको वचनमा पाइने “पवित्र शक्तिको तागत प्रदर्शन” गर्दै प्रभावकारी साक्षी दिन उत्प्रेरित हुन्छौं।—१ कोरि. २:४.
१०. हामी अरू के-कस्ता कुराहरूमा मनन गर्न सक्छौं?
१० के तपाईं जनभाषण, सम्मेलन वा अधिवेशनमा टिपोट लिनुहुन्छ? आफूले लिएको टिपोट फेरि दोहोऱ्याएर हेर्नु पनि मनन गर्ने राम्रो तरिका हो। यसरी मनन गर्दा परमेश्वरको वचन र उहाँको सङ्गठनबारे आफूले सिकेको कुरा मनमा खेलाउनुहोस्। प्रहरीधरहरा र ब्यूँझनुहोस्! पत्रिकामा अनि अधिवेशनमा विमोचन हुने प्रकाशनहरूमा नयाँ-नयाँ जानकारीहरू आउँछन्‌। हामी त्यस्ता जानकारीहरूमा पनि मनन गर्न सक्छौं। तपाईंको भाषामा वार्षिक पुस्तक छ होला। तर छैन भने पनि अङ्ग्रेजी भाषा बुझ्नुहुन्छ भने नयाँ-नयाँ अनुभव पढेर मनन गर्न सक्नुहुन्छ। ती अनुभवहरू पढ्दा एउटा अनुभव पढिसकेपछि अर्को पढिहाल्नुभन्दा एकछिन रोकिएर त्यसबारे सोच्नु राम्रो हो। यसो गर्दा आफूले पढेको अनुभव तपाईंको मनभित्र पुग्छ। आफूलाई रोचक लागेको बुँदामा चिन्ह लगाउनुहोस् अथवा छेउमा छोटो टिपोट लेख्नुहोस्। पुनःभेट गर्दा, गोठालो भेट गर्दा वा भाषण दिंदा यी बुँदाहरू उपयोगी हुन सक्छ। प्रकाशनहरू पढ्दा यसरी बीच-बीचमा रोकिएर मनन गर्दा पढेका कुराहरू मनसम्म पुग्छ र आफूले सिकेको राम्रा कुराहरूका लागि यहोवालाई धन्यवाद चढाउने मौका पनि पाइन्छ।
हरेक दिन परमेश्वरको वचन मनन गर्नुहोस्
११. हामीले मनन गर्न सक्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय के हो र किन? (फुटनोट पनि हेर्नुहोस्)
११ हामीले मनन गर्नुपर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय बाइबलमा लेखिएका कुराहरू हुन्‌। कहिलेकाहीं विभिन्न परिस्थितिले गर्दा हामीसित बाइबल नहुन सक्छ अथवा आफूसित बाइबल राख्न नपाउने हुन सक्छ। * तर आफूलाई मन परेको शास्त्रपद वा राज्य गीत कण्ठ गर्नुभएको छ भने त्यस्ता कुराहरूमा मनन गर्न तपाईंलाई कसैले छेक्न सक्दैन। (प्रेषि. १६:२५) सिकेका कुराहरू सम्झन तपाईंलाई पवित्र शक्तिले मदत गर्न सक्छ।—यूह. १४:२६.
१२. हरेक दिन बाइबल पढ्ने तालिका तपाईं कसरी मिलाउन सक्नुहुन्छ?
१२ हरेक दिन बाइबल पढ्ने तालिका तपाईं कसरी मिलाउन सक्नुहुन्छ? हप्ताको कुनै-कुनै दिन ईश्वरतान्त्रिक सेवा स्कुलको साप्ताहिक बाइबल पढाइका भागहरू पढ्न र मनन गर्न सक्नुहुन्छ। अरू दिनहरूमा मत्ती, मर्कूस, लूका र यूहन्ना जस्ता किताबहरू पढेर येशूले भन्नुभएका र गर्नुभएका कुराहरू मनन गर्न सक्नुहुन्छ। (रोमी १०:१७; हिब्रू १२:२; १ पत्रु. २:२१) येशूको जीवनमा घटेका घटनाहरू क्रमबद्ध रूपमा लेखिएका प्रकाशनहरू पनि हामीसँग छन्‌। त्यस्ता प्रकाशनहरू हाम्रा लागि निकै मदतकारी हुन सक्छन्‌ तर ती प्रकाशनहरूबाट धेरै भन्दा धेरै लाभ उठाउन उल्लिखित पदहरू सीधै बाइबलबाट पढेर मनन गर्नुपर्छ।—यूह. १४:६.
मनन गर्नु किन महत्त्वपूर्ण छ?
१३, १४. आध्यात्मिक कुराहरूमा मनन गरिरहनु किन महत्त्वपूर्ण छ र यसले हामीलाई के गर्न उत्प्रेरित गर्छ?
१३ आध्यात्मिक कुराहरूमा मनन गर्दा त्यसले हामीलाई परिपक्व ख्रीष्टियन बन्न मदत गर्छ। (हिब्रू ५:१४; ६:१) यहोवा र येशूबारे मनन नगर्ने व्यक्तिको विश्वास बलियो हुन सक्दैन। ऊ परमेश्वरदेखि बिस्तारै टाढा हुँदै जान्छ र उसले यहोवालाई त्याग्न पनि सक्छ। (हिब्रू २:१; ३:१२) हामीले “असल मन”-ले परमेश्वरको वचन सुन्नुपर्छ र ‘त्यसलाई मनमा राख्नुपर्छ।’ यसो गर्दैनौं भने “जीवनको फिक्री, धनसम्पत्ति अनि मोजमज्जाले गर्दा” हामी निसासिन सक्छौं।—लूका ८:१४, १५.
१४ त्यसैले परमेश्वरको वचन नियमित रूपमा मनन गरिरहौं। परमेश्वरको वचनमा मनन गरिरहन्छौं भने हामी उहाँलाई अझ राम्ररी चिन्दै जान्छौं अनि उहाँको व्यक्तित्व र गुण अनुकरण गर्न पनि उत्प्रेरित हुन्छौं। (२ कोरि. ३:१८) परमेश्वरबारे सिक्न पाउनु अनि उहाँको अनुकरण गरेर उहाँकै जस्तो गुण र व्यक्तित्व झल्काउन पाउनु हाम्रो निम्ति ठूलो सम्मानको कुरा हो।—उप. ३:११.
१५, १६. (क) आध्यात्मिक कुराहरूमा मनन गरेर तपाईंले कस्तो लाभ उठाउनुभएको छ? (ख) मनन गर्नु कहिलेकाहीं किन गाह्रो हुन सक्छ तर हामीले किन मनन गर्ने प्रयास गरिरहनुपर्छ?
१५ आध्यात्मिक कुराहरूमा मनन गरिरह्यौं भने हाम्रो जोस कहिल्यै सेलाउन पाउँदैन। मण्डलीका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र प्रचारमा भेटिएका मानिसहरूले हाम्रो कुरा सुनेर प्रोत्साहन पाउनेछन्‌। परमेश्वरले दिनुभएको अमूल्य वरदान फिरौतीको प्रबन्धबारे गहिरो मनन गर्दा यहोवासित गाँसेको घनिष्ठ सम्बन्धको अझ कदर गर्न सक्नेछौं। (रोमी ३:२४; याकू. ४:८) दक्षिण अफ्रिकामा बस्ने भाइ मार्कले यहोवाको स्तरअनुसार चल्ने अडान लिंदा तीन वर्षको जेल सजाय भोग्नुपऱ्यो। तिनी यसो भन्छन्‌: “मननलाई एउटा रमाइलो यात्रासित तुलना गर्न सकिन्छ। हामी आध्यात्मिक कुराहरूमा जति मनन गर्छौं, यहोवा परमेश्वरबारे त्यति नै नयाँ कुराहरू पत्ता लगाउँछौं। कहिलेकाहीं निरुत्साहित हुँदा वा चिन्ता लाग्दा म बाइबल पढ्छु र मनन गर्छु। यसले मलाई निकै बल दिन्छ।”
१६ अहिले संसारमा अलमल्याउने कुराहरू धेरै छन्‌, जसले गर्दा आध्यात्मिक कुराहरूमा मनन गर्ने समय पाउनै गाह्रो हुन्छ। अफ्रिकामा बस्ने अर्का भाइ प्याट्रिक यसो भन्छन्‌: “कहिलेकाहीं त मलाई आफ्नो दिमाग चिठ्ठी खसाल्ने बाकस जस्तै लाग्छ। यो चाहिने नचाहिने कुराहरूले भरिएको हुन्छ। त्यसैले मेरो दिमागमा भएका कुरा खोतल्दा म अक्सर ‘फिक्री नै फिक्री’ मात्र भेट्टाउँछु। यस्तो बेला म यहोवालाई प्रार्थना गर्छु। यसो गर्दा केही समय त लाग्छ तर त्यसपछि शान्त मनले मनन गर्न सक्छु। त्यसपछि यहोवासित घनिष्ठ भएको र बाइबलका कुराहरू अझ राम्ररी बुझ्न सकेको महसुस गर्छु।” (भज. ९४:१९) हो, ‘दिनहुँ धर्मशास्त्र जाँचेर’ अनि आफूले सिकेको कुरा मनन गरेर हामी सबैले लाभ उठाउन सक्छौं।—प्रेषि. १७:११.
समय कसरी निकाल्न सकिन्छ?
१७. तपाईं मनन गर्ने समय कसरी निकाल्नुहुन्छ?
१७ पढ्न, मनन गर्न र प्रार्थना गर्न कोही-कोही सबेरै उठ्छन्‌। कसै-कसैले भने काम गर्ने ठाउँमा वा स्कुलमा खाजा खाने समयमा त्यसो गर्छन्‌। तपाईं साँझ वा ओछ्यानमा जानुअघि मनन गर्न सक्नुहुन्छ। कसै-कसैले बिहान अनि सुत्नुअघि पनि बाइबल पढ्छन्‌। यसरी तिनीहरूले “दिन-रात” वा नियमित तवरमा बाइबल पढिरहेका हुन्छन्‌। (यहो. १:८) महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने, हरेक दिन परमेश्वरको वचन मनन गर्ने समय निकाल्न कम महत्त्वपूर्ण कुराहरूलाई पन्छाउनुपर्छ।—एफि. ५:१५, १६.
१८. हरेक दिन परमेश्वरको वचन मनन गर्ने र सिकेको कुरा लागू गर्ने मानिसबारे बाइबल के भन्छ?
१८ परमेश्वरको वचन मनन गर्ने र सिकेको कुरा लागू गर्ने सबैलाई यहोवाले आशिष्‌ दिनुहुन्छ भन्ने कुरा बाइबलमा धेरै ठाउँमा लेखिएको छ। (भजन १:१-३ पढ्नुहोस्) येशूले यसो भन्नुभयो: “धन्य त तिनीहरू हुन्‌, जसले परमेश्वरको वचन सुन्छन्‌ र पालन गर्छन्‌!” (लूका ११:२८) यसरी हरेक दिन परमेश्वरको वचन मनन गर्दा हामी आनन्दित हुन्छौं। तर त्यो भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा, हाम्रो दिमागको सृष्टिकर्ता यहोवाको प्रशंसा गर्न सक्छौं र उहाँले हामीलाई अहिल्यै प्रशस्त खुसी अनि भविष्यमा अनन्त जीवन दिनुहुनेछ।—याकू. १:२५; प्रका. १:३.
^ अनु. 11 डिसेम्बर १, २००६ को प्रहरीधरहरा (अङ्ग्रेजी), पृष्ठ १२-१६ मा भएको जीवनी पढ्नुहोस्।
Text डिजिटल प्रकाशन डाउनलोडका विकल्प प्रहरीधरहरा—अध्ययन संस्करण अक्टोबर २०१५